Barcelona iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareegga quarter finalka Champions League… – Hagaag.com
Posted on 9 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiddiga reer Argentine Lionel Messi ayaa ku hogaamiyay kooxdiisa Barcelona guushii 3-1 aheyd ee ay ka gaareen Napoli tartanka Champions League ciyaarii ka dhacday garoonka Camp Nou, laakin waxay balan la leedahy kooxda Bayern Munich Jimcaha wareega quarter finalka oo ah koox aad u adag.
Barcelona ayaa lugtii hore ee ciyaarta fursad u heshay barbaro 1-1 kulankii ka dhacay Napoli, taasoo ka dhigtay Napoli inay ku bilowdo si xamaasad leh oo ay gacanta ku heyso daqiiqado kubada, laakiin muddo gaaban kadib waxaa lagala wareegay gacan ku heynta kubada.
Napoli ayaa sida runta ah aad u dadaashay laakin waxaa loogu badiyey isku celcelis ahaan labada lugood 4-2, sidaasina Napoli waxay gacanta bidix isku macasalaameeyeen Champions League.
Dhinaca kale ciyaartii Bayern Munich iyo Chelsea oo lagu qabtay garoonka Bayern ayaan runtii laheyn xiiso badan, maadaama guriga Chelsea looga soo badiyey 3-0, maxaad ka sugi kartaa guriga Bayern, runtii waxaa la sii ogaa in Bayern ay soo bixi doonto, waxaana Chelsea lagu dhuftay 4-1, halka isku celceliska labada ciyaarood natiijadoodu noqotay 7-1. taasi waxaa kaaga muuqanaya in si xun loo jajabsaday Chelsea oo berri hore ka mid ahaan jirtay kooxaha magaca ku leh qaarada Yurub oo laga cabsado.